အစ္စလာမ်မီအစိုးရအား တည်ထောင်ခြင်းအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ဖဖေျောဝါရီ ၂၅, ၂၀၁၈ - ၁၀:၃၉ ညနေ News Code : 883455 Source : ABNA Link:
လက်ရှိရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ ၏ အကျော်အမော် အာလင်မ် ဟဇရသ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမိုရှီးရာဇီး ဟောကြားတော်မူသည့် တရားတော် အမြောက် အများ မှ ((အစ္စလာမ်မီအစိုးရအား တည်ထောင်ခြင်း)) ခေါင်း စဉ်ဖြင့် တရား တော်တစ်ခုအား တင်ပြအပ်ပါတယ်။
بُنِيَ الاْسْلامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْياءَ: عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوِلايَةِ، قالَ زُرارَةُ: فَقُلْتُ وَأىُّ شَيء مِنْ ذلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقالَ: أَلْوِلايَةُ أَفْضَلُ، لاِنَّها مِفْتاحُهُنَّ، وَ الْوالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ
အချို့(အိုလမာယေရှီအာ)အနေဖြင့် ဝေလာယသ်ဆိုသည်မှာ အဟ်လေဘိုက် (အ.စ)အပေါ်အချစ်၊မေတ္တာ၊ချစ်ခင်၊နှစ်သက်၊မြတ်နိုးခြင်း၊တွယ်တာခြင်းနှင့် သဝလ် စိုလ်ပြုခြင်းကို ဆိုလိုသည်ဟုခံယူထားလေသည်။သို့သော် ဤဟဒီးစ်တော်ပါ ဝေလာ ယသ်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အစိုးရ၊အချုပ်အချာအာဏာကို ထူထောင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ဆို လိုသည်မှာ မွတ်စလင်တစ်ယောက် နမာဇ်၊ဇကားသ်၊ဟဂ်ျ၊ရိုဇာအပြင် အစ္စလာမ်မီအ စိုးရ အချုပ်အချာအာဏာကိုလည်း လက်ခံသဘောတူသူဖြစ်ရပေမည်။မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့် အအ်အေမေ၊အေမာမ်(၁၂)ပါး(အ.စ)တို့၏ အချုပ်အချာအာ ဏာနှင့် ၎င်းတို့၏(စစ်မှန်သည့်)ကိုယ်စားလှယ်တော်များမှ အချုပ်အချာအာဏာကို လည်း လက်ခံသဘောတူသူဖြစ်ရပေမည်။ဤသဖ်စီးရ်အတွက် သက်သေ၊အ ထောက်အထား၊အကိုးအကားအဖြစ် ရီဝါယတ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပေသည်။
အေမာမ်(အ.စ)အားမေးမြန်းခဲ့လေ၏။အဘယ်အတွက်ကြောင့် အခြား အခြေ ခံအုတ်မြစ် အားလုံးထက် အရေးကြီးရပါသနည်း? အဖြေပေးမိန့်တော်မူသည်။ဝေ လာယသ် အခြားအခြေခံအုတ်မြစ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ရန်အ တွက် အာမခံဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍အစ္စလာမ်မီ အချုပ်အချာအာဏာ၊အစိုးရမထူထောင်နိုင်ခဲ့မည်ဆို လျှင် နမာဇ်တည်ဆောက်မှု၊ခွမ်းစ်၊ဇကားသ်၊ရိုဇာနှင့် ဟဂ်ျတို့ကို ကျယ်ပြန့်စွာ၊စည် ကားစွာဖြင့်လည်းကောင်း၊ဤအရာများ၏ဖလ်စဖာများတင်ပြခွင့်ရရှိလိမ့်မည် မဟုတ် ချေ။
ဤအတွက်ကြောင့် ယေလာယသ်သည် ချစ်ခင်တွယ်တာမှု၊နှစ်သက်မှု၊အချစ် မေတ္တာ၊သဝလ်စိုလ်အတွက်သာလျှင် မဟုတ်ချေ။တစ်နည်းဆိုရလျှင် နဘီတမန် တော်များ(အ.စ)(သို့)ပြစ်မဲ့မာစူမ် အေမာမ်များ(အ.စ) တို့ဘက်မှ တည်ထောင်ထား သည့် အစ္စလာမ်မီအစိုးရကို လက်ခံသဘောတူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအတွက်ကြောင့် တမန်တော်များ(အ.စ)၏ သမိုင်းတလျောက်လုံး တမန် တော်တိုင်း အင်အား၊စွမ်းအားရသည့်နှင့် အစိုးရကို တည်ထောင်ခဲ့ပေသည်။ဟဇရတ် ဒါဝူးဒ်(အ.စ)၊ဟဇရတ်စိုလိုင်းမန်(အ.စ)၊ဟဇရတ်မူဆာ(အ.စ)နှင့်မဟာတမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)စသည် ပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များသည် အစိုးရကို ထူထောင်တော်မူခဲ့ ကြပေသည်။
အကယ်၍ ဟဇရတ်အီဗရာဟီးမ်(အ.စ)နှင့်ဟဇရတ်အီဆာတို့အနေဖြင့် ဤ ကြီးမားသည့် လုပ်ဆောင်မှု(အစိုးရထူထောင်ခြင်း)အား အခွင့်အလမ်းနှင့် လိုအပ်မှု များ မဖူလုံခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် အစိုးရမထူထောင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်၏(စစ်မှန်သည့်)အစ္စလာမ်မီ အစိုးရအား ထူထောင်ရန် လိုလားတော်မူခဲ့ခြင်း
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ရှဟီးဒ်ဘွဲ့ခံယူတော်မူရန်အတွက်သာ သီး သန့် ကရ်ဗလာသို့ ကြွမြန်းလာတော် မမူခဲ့ချေ။တစ်နည်းဆိုရလျှင် ရည်ရွယ်ချက် တော်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် အစ္စလာမ်မီ အစိုးရထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်ပါ ကရ်ဗ လာသို့ကြွမြန်း လာတော်မူခဲ့ပေသည်။
နောက်ဆုံးရှဟီးဒ်ဖြစ်တော်မူမည်ကိုပင် သိတော်မူခဲ့ပေသည်။ဤအကြောင်း အရာနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အေမာမ်(အ.စ)၏ဩဝါဒတော်မှတစ်ခုကို လေ့လာဖတ်ရှုကြည့် ပါမည်။
اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَاكَانَ مِنَّا تَنافُساً فِي سُلْطان، وَلا الْتماساً مِنْ فُضُولِالْحُطامِ،وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَالاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ،وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ،وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَوَأَحْكامِكَ
အဓိပ္ပါယ်။။အို! အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်... အရှင်အနေဖြင့်ကျွန်တော်မျိုး၏ တော်လှန်ရေးသည် လူထုအပေါ် အုပ်ချုပ်လို၍၊မင်းလုပ်လို၍အတွက်နှင့် လောကီ၏ စည်းစိမ်၊ဂုဏ်ဒြပ်အတွက် မဟုတ်ကြောင်းကောင်းစွာ သိတော်မူပါသည်။တစ်နည်းဆို ရလျှင် ကျွန်တော်မျိုး၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် အစိုးရ အချုပ်၊အချာအာဏာဆိုသည်မှာ အရှင်၏သာသနာတော်တွင် ဆရာသမား(သင်ကြားပို့ချပေးသူ)နှင့် လက္ခဏာတော် များ ပြည်သူလူထုအတွက်စီမံနိုင်သည်။ထိုပြင် နိုင်ငံများ၊မြို့များတွင် ပြောင်းလဲပြုပြင် ပေးမှု ပြုနိုင်သည့် အရှင်ကျေးကျွန်များ၏ လုံခြုံမှု၊ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကိုစီစဉ်ပေးနိုင် သည့် အသင်၏ဥပဒေတော်များနှင့် စွန္နတ်တော်များ၊တာဝန်ဝတ္တရားများကို လက် တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အစိုးရ အချုပ်အချာအာဏာကို ဆို လို တော်မူပါသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ကူဖာမြို့တော်သို့ မကြွမြန်းမည်အလျှင် မိမိ ၏အထူးရှယ် ကိုယ်စားလှယ်တော် ဟဇရတ်မွတ်စလင် ဗင်အကီးလ်အား ကူဖွာမြို့ တော်သို့ စေလွတ်တော်မူခဲ့ပြီး၊၎င်းအား ပြည်သူလူထုထံမှ ဗိုင်အတ်ယူရန်ဖြစ် ကြောင်း ကျွန်တော်တို့သိပေသည်။ဤဗိုင်အတ် ယူစေတော်မူသည့်(စစ်မှန်သည့်) အစိုးရထူထောင်မှုမှအပ အခြားကိစ္စ ဖြစ်နိုင်ပါသလော?
အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် နေ့တိုင်းအာရှုရာ၊မြေပထဝီတိုင်း ကရ်ဗ လာ ဖြစ်ကြောင်း ခံယူယုံကြည်ထားသည်ဆိုလျှင် မလွဲမသွေ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)၏ ညာသံတော်နှင့်အတူ ကိုယ်တော်၏ကျန်ညာသံတော်များ ရည်ရွယ်ချက် များကိုလည်း သမိုင်းတလျှောက်လုံးရှိ မြေပထဝီတိုင်းတွင် ထွန်းတောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရပေမည်။
သစ္စာမဲ့ အီမာန်အားနည်းသည့် ကူဖာမြို့သူ၊မြို့သားအချို့သည် အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ)အားမကူညီခဲ့ကြချေ။အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)၏ မွန်မြတ်လှသည့် ရည်ရွယ်ချက်တော်(အစ္စလာမ် အစိုးရ ထူထောင်ရန်)အတွက် ထိုသစ္စာမဲ့ အီမာန် အားနည်းသည့် ကူဖာမြို့သူ၊မြို့သားများ အချို့သည် ကာယပိုင်းအရ ပိတ်ဆို့မှု ပြု လုပ်ခဲ့ကြပေသည်။
သို့သော်ယနေ့ သစ္စာရှိ ခိုင်မာသည့် အီမာန်ရှိ မွတ်စလင်များ ရှိနေပါသည်။ထို မွတ်စလင်များသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် မိမိ၏ရှိသမျှအား လုံးကို စတေးရန်ရှိပေသည်။
ဤမျှဆိုလျှင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒတော်မှ ရည်ရွယ်ချက်တော် များနှင့် တလောကလုံးတွင်(စစ်မှန်သည့်)အစ္စလာမ်အစိုးရ ထူထောင်ရန်နှင့် လောက ကြီးကို အေမာမ်မဟ်ဒီ(အ.ဂျ)၏ အစိုးရထူထောင်နိုင်ရန် အသင့်ပြုခြင်းစကားများအ ဘယ်ကြောင့် မဆိုရပါသနည်း
သာသနာနှင့်(စစ်မှန်သည့်)နိုင်ငံရေး သီးသန့်စီအတွက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား? အကယ်၍ သာသနာသည် အစိုးရ၊အချုပ်အချာအာဏာမပါဘဲ ထိုအစိုးရသည် ဇွာ လင်မ်အစိုးရ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။အစိုးရအနေဖြင့် သာသနာမရှိဘဲဆိုလျှင် ထိုသာသနာ တော်သည် အလွန်တရာ ရလာဒ်အကျိုးနည်းပေလိမ့်မည်။
ရိုသေလေးစားရသည့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏အဇာဒါရီပြုလုပ်ကြသူများ၊ အချစ်မေတ္တာထားပြီး မာတမ်(ရင်ထု)ကြပေသည်။အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ မဇ် လူးမီးသည်(နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း၊မတရားအသတ်ဖြတ်ခံရမှု…)အတွက် မျက်ရည်ကျရ ပေသည်။အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုအတွက် မဂျလစ်တော်များ ကို မိမိတို့၏အချိန်၊ပစ္စည်း၊ဥစ္စာ၊ကိုယ်ခန္ဓာ အသက်ကိုရင်းပြီး ကာကွယ်ရပေမည်။၎င်း တို့အား ပြောကြားသင့်ပေသည်။
ကိုယ်တော်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည်(စစ်မှန်သည့်)အစ္စလာမ်မီအစိုးရ၊အချုပ်အချာအာဏာကို ထူထောင်ရန်အတွက် လိုလားခဲ့ပေသည်။အေမာမ်ဟိုစိုင်း (န)(အ.စ)၏ မြင့်မြတ်လှသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပိတ်ဆို့မှုအကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေသည်။(ထိုပိတ်ဆို့မှုများကို)ဖယ်ရှင်းခြင်းဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) ၏ မြင့်မြတ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(ပြည်ထောင်စု အစ္စလာမ်မစ်)အီရန်နိုင်ငံရှိ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ နောက်လိုက်၊နောက်သားများဖြစ်သည့် ကျွန်တော်တို့ရှီအာများအနေဖြင့် ကျက်သ ရေမင်္ဂလာ၊လာဒ်လာဘနှင့် ပြည့်စုံသည့် ဝမ်းနည်းခြင်းအတွက် မဟော်ရမ်လများတွင် ကျင်းပသည့် မဂျလစ်တော်များ၊သာစူအာများ((၉)ရက်မြောက် မဟော်ရမ်)၊အာရှုရာ များ၊ကျဟ်လွန်မ်များဖြင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ မေတ္တာ၊ဂရုဏာတော်ဖြင့် အစ္စလာမ်မီ အချုပ်အချာအာဏာ၊တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အခက်၊အခဲများကို ဖြေ ရှင်းနိုင်ရန်အတွက် မဖြစ်မနေ၊အသက်ဖြင့်၊နှလုံးသားဖြင့်(ကာယ၊ဥာဏန)ဖြင့် ကြိုး စားရပေမည်။
 كافى، ج 2، كتاب الايمان والكفر، باب دعائم الاسلام، ح 5
 بحارالانوار، ج 100، ص 80